Wednesday, 01 June 2022 21:08
Pireezedaantiin Yuunvarsiitii Arsii Dr.Dhugumaa Addunyaa sirna kana irratti akka jedhanitti, Sirni Gadaa akkataa hawaasni Karaa dimokiraatawa ta'een itti waliin jiraatuu fi ittiin Wal bulchas ture kan barsiisudha jedhan.
Dr. Dhugumaan itti dabaluudhaan duudhaa hawaasni Keenna ganamaa qabutti deebi'uuf mariin akkanaa murteessadha jedhan. Yunvasitoonni iddoo barnootaa fi qorannoo fi qo'annoo waan ta'aniif sirna akkanaa miidhagaa sababoota garagaraatiin mabca'e kana beekumsa irratti hundaa'uun qoratanii bakkatti deedisuuf kutannoo akka qabnu walii galteen yunvarsiitiiwwan Finfinnee fi Jimmaa walii tolchine ragaa guddaadha jedhan.
Yuunvarsiitii Arsiitti Pireezedaantii Itti Aanaan Dhimma Qorannoofi Tajaajila Hawaasaa Dr. Adaam Kadiiriis, qorannoon kun Irreechi kutaalee Oromiyaa keessatti akkamiifi yeroo akkamitti akka irreffatamu irratti qoratamaa jedhan.
Pirojektiin yunivarsitoota sadanii fi inistiitiyuutii qorannoo oromoo waliin hojjachaa jiran kun bu'aa olaanaa kan qabuu fi duudhaa fi aadaa Saba keenyaa awwaalame tures ifatti baasuuf kan itti gargaaramnuudha jedhan.
Diiniin Koolleejjii Saayinsii Hawaasaafi Namummaa Dr.Waaqoo Gadaa, Kooleejjichi beekumsa ganamaa Oromoo qoratamee dhalootaaf akka darbuuf xiyyeeffannoo addaa itti kennee Kan hojjataa jiru ta'uu eeruun gara fuula duraattis kanuma cimsanii itti fufsiisuuf Kan hojjatan ta'uu kaasan.
Qorattoonni Yuunvarsiitii Arsii ,Finfinnee,Jimmaaf Inistitiyuutii Qorannoofi Qo’annoo Oromoos haala qorannichi irra jiruufi kallattii gara fuulduraa irratti qooda fudhattoota waliin mari'atanii jiru.
Read 95 times	Last modified on Wednesday, 01 June 2022 21:32
More in this category: « May 31, 2022 Arsi University College of Health Sciences Yunivarsitii Arsiitti Koolleejjin Saayinsii Hawaasummaa fi Humaanitii workishooppii gaggeesse. »